मूर्खहरूको षडयन्त्र: कसले यो लेख्यो, यसको बारेमा के हो र जिज्ञासुहरू | वर्तमान साहित्य
के तपाईंले कहिल्यै पढ्नुभएको छ? Ceciuos को conjuing? के तपाईंलाई थाहा छ यो के हो? हुनसक्छ यो त्यस्तो क्षण हो जब तपाईले कुनै त्यस्तो कथा पढ्नुभयो जसमा तपाईले सोच्नुहुन्छ कि मानिसहरूले कसरी बाँच्दछन् र अब कसरी गरिन्छ, एक उपन्यास जसले समाजको आलोचना समेट्ने एक लेखकको लेखक पनि छ जसले पनि अपर्याप्त महसुस गर्यो।
त्यसोभए हामी तपाईंलाई पुन: गणना गर्न गइरहेका छौं, निस्सन्देह तपाईलाई अन्त्य नबनाईकन, तपाईले यस पुस्तकमा फेला पार्नुहुने सबै कुरा।
1 जसले मूर्खहरूको षडयन्त्र लेखेका थिए
2 मूर्खहरूको षडयन्त्र के हो भन्ने बारे
2.1 पुस्तकको सारांश
3 यसको शैली र संरचना कस्तो छ
जसले मूर्खहरूको षडयन्त्र लेखेका थिए
लेखक जसको लागि हामी owणी छौं मूर्खहरूको षडयन्त्र जोन क्यानेडी टूल हो। उहाँ १ 1937 31 मा न्यु अर्लिन्समा जन्मनुभएको थियो र 1969१ वर्ष पछि १ 1980 1981 died मा उनको मृत्यु भयो। उनको पुस्तक उहाँ जीवित छँदा प्रकाशित भएन, तर मरणोपरांत प्रकाशित हुनुभयो (१ XNUMX in० मा) र १ XNUMX XNUMX१ मा उनको कल्पित कथाका लागि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त भयो।
जोन जोन र थेल्मा टूलका छोरा थिए, आफ्ना छोराप्रति विशेष सुरक्षात्मक आमाबाबु, विशेष गरी उनकी आमा, जसले उसलाई अरू बच्चाहरूसँग खेल्न दिनुभएन। यसले उसलाई आफ्नो पढाइतिर फर्कायो र अनुकरणीय विद्यार्थी थियो। उनले Tulane विश्वविद्यालयबाट स्नातक र कोलम्बिया मा अंग्रेजी मा बीए पूरा गरे। त्यस पछि उनले एक बर्ष दक्षिण पश्चिमी लुइसियाना विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका सहायक प्राध्यापकको रूपमा काम गर्न थाले।
त्यहाँबाट उनी न्यु योर्क गए, हन्टर कलेजमा शिक्षाको स्थान लिन।
यद्यपि उनले प्रशिक्षणको लागि आफ्नो पेशा गुमाएनन्, किनभने उनले डक्टरेट लिन प्रयास गरे। यद्यपि सेनामा जान पछि उनले दुई वर्ष स्प्यानिश भाषा बोल्ने भर्ना गर्नेलाई अ teaching्ग्रेजी पढाउँदै बिताए।
जब उहाँ युद्धबाट फर्कनुभयो, उहाँ न्यू ओर्लिन्समा बसोबास गर्नुभयो जहाँ उहाँ आफ्ना बाबुआमासँग बस्नुभयो र डोमिनिकन कलेजमा काम गर्न शुरू गर्नुभयो। यद्यपि उनले आफ्ना साथीहरुलाई पनि सहयोग गरे (उदाहरणका लागि तामाले बिक्री गरेर) वा, Tulane विश्वविद्यालयबाट सम्मान संग स्नातक गरे पछि, एक पुरुष कपडा कारखानामा कार्यरत।
यी सबै कुरा उनले आफ्नो पुस्तक, कन्परेसी अफ फूलहरूको पुस्तकमा समेटेका थिए र जब उनले यसलाई समाप्त गरे उनले सिमोन र शुस्टर प्रकाशन गृहमा पठाए। तर यो अस्वीकार गरियो किनभने "यो वास्तवमै कुनै पनि कुराको बारेमा थिएन।" त्यसो भए टुलले निराश हुन थाल्छ। उसले पिउने काममा लाग्यो, काम गर्न छाडे र suicide१ बर्षको उमेरमा उनले आत्महत्या गरे।
यो थियो उनको आमा जसले आफ्नो छोराको काम पढ्नको लागि कसैको लागि संघर्ष गरे। र त्यो कोही वाकर पर्सी थिए जो जिद्दीले थकित थिए र पुस्तकबाट खुशी भए। तसर्थ, पर्सी पुस्तकको अग्रगामी थियो। यस सफलताको परिणाम स्वरूप, अर्को उपन्यास उद्धार गरियो कि लेखक १ 16 वर्षको छँदा लेखेका थिए र जुन उनी नियोन बाइबललाई खराब ठान्थे।
मूर्खहरूको षडयन्त्र के हो भन्ने बारे
मूर्खहरूको षडयन्त्रमा तपाईंले भेट्नुहुनेछaमुख्य चरित्र, Ignatius J. Reilly। यो मानिस एक मिसफिट र anachronist छ। ऊ एक मध्यकालीन जीवन बिताउन, आफ्नो जीवन शैली, आफ्नो नैतिकता, आदि संग बाँच्न मनपर्दछ। तसर्थ, सम्पूर्ण विश्वले सुन्नका लागि, उनले सयौं नोटबुक लेख्ने निर्णय गर्दछ जहाँ उसले विश्वको त्यो दर्शन देखाउँदछ। प्रत्येक नोटबुकले आफ्नो कोठामा कुनै अर्डर बिना नै ठाउँ लिन्छ, यद्यपि तिनीसँग अर्डर गर्ने दृढ इरादा उसको हो। कुनै दिन
उसको लागि काम एकदम नराम्रो कुरा हो, जसलाई हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ किनकि विश्व पूँजीपति हो र उसले दासत्वको रूप मान्छ। त्यसोभए उनी बोथियस (जसले आफ्नै कार्यान्वयन स्वीकारेका थिए) सँग आफूलाई दाँज्छ र बाँच्नको लागि खोजी गर्ने सेट गर्छ। र त्यहाँबाट एउटा कथा छिन, यद्यपि यसले तपाईंलाई धेरै हाँस्नेछ, यसले तपाईंलाई अतिरंजित तरिकाले पनि देखाउँदछ, आजको समाज कस्तो छ: यसको स्वार्थ, क्रूरता, उदासिनताका साथ ...
संक्षिप्तमा, हो, तपाईं पुस्तकको साथ हाँस्नुहुनेछ, तर तपाईंलाई यो पनि देखेर अफसोस हुनेछ कि संसार कसरी भयो र यो पहिले कस्तो त्यस्तो थिएन, न त यो यो सिद्धान्तहरू द्वारा संचालित थियो कि जस्तो देखिन्छ कि हामी सबैले क्रमश: अनुसरण गरेका छौं। "अनुकूलन" र समाज को एक हुन।
यहाँ यसको सार हो:
कन्जायरेसन अफ फूल एक पागल, एसिड र अत्यधिक बुद्धिमान उपन्यास हो। तर यो मात्र होईन, यो अत्यन्तै हास्यास्पद पनि छ र एकै पटक तीता पनि। हाँसो एक्लैले यो महान त्रासदीको असंगत परिस्थितिहरूको अघि आफै उम्किन्छ। इग्नाटियस जे वास्तवमा अहिले सम्मको सबैभन्दा राम्रो चरित्र मध्ये एक हो र धेरै जसलाई डन Quixote सँग तुलना गर्न हिचकिचाउँदैन। यसबाहेक, उहाँ उत्कृष्ट पात्रहरूको पूर्ण उपन्यासका लागि उत्तम प्रतिरोधी व्यक्ति हुनुहुन्छ, नयाँ ओर्लिन्सको बन्दरगाह शहरमा सेट गरिएको, मास्टरफुल इग्नाटियस।
ऊ गलत अर्थ लगाईन्छ, आफ्नो उमेरको तीसौं वर्षको मान्छे जो उसकी आमाको घरमा बस्छ र जो आफ्नो कोठाबाट राम्रो संसार प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दैछ। तर क्रुरतासाथ उनलाई कामको खोजीमा न्यु ओर्लिन्सका सडकहरूमा घुम्न जान बाध्य तुल्याइनेछ, समाजमा प्रवेश गर्न बाध्य पारिएको छ, जसको साथ उसले आपसी घृणाको सम्बन्ध कायम राख्छ, जसमा एक कार दुर्घटनामा आफ्नी आमाले गरेको खर्चको हिसाब गर्न सक्षम हुनेछ। म मतवाला थिए। लेखक, जोन के। टूले, एक मध्यम-वर्ग समीक्षा प्राप्त गर्दछ।
यसले पाठकको चासो (पहिलेको तुलनामा दोस्रो पठनमा पनि ठूलो) राख्छ जसले अधिक नराम्रो हुन्छ। उसले टाउकोले कुनै कठपुतली छोड्दैन र, इग्नाटियसको छलकपट र संगठित व्यक्तित्वको माध्यमबाट, उसले आफू हाँसीरहेको समयको समीक्षा गर्दछ जुन चित्रित पात्रहरूको जीवनको दुखद दर्शनसँग भिन्न छ। हामी केवल सामाजिक आलोचनाको एक पागल र कष्टदायी कथा फेला पार्दैनौं, तर कथानक शुरूदेखि नै। एक पलमा, जसका नायकले भनेका छन्, फोर्टुनाले उनको पा wheel्ग्रालाई तलतिर मोड्छन् र हामी जान्दैनौं कि कुन भाग्य हाम्रो लागि भण्डारमा छ भन्ने अप्रिय आश्चर्य।
यहाँबाट, केहि परिस्थितिहरू अरुसँग मिलेर हिँडे, पात्रहरूले गरेझैं, र एक विशाल स्नोबल बनेको छ जुन उपन्यासको अन्त्यमा विस्फोट हुन्छ। ला कन्जुरा डे लस फोसियो समाप्त गरेपछि, 32२ वर्षको उमेरमा, लेखकले यसलाई प्रकाशित गर्ने असफल प्रयास गरे। यो एक गहिरो उदासिनता को लागी आत्महत्या गर्न को लागी। उनको आमाको कठोरता र आग्रहका लागि धन्यवाद, आज हामी यस स्वादिष्ट कार्यको मज्जा लिन सक्दछौं जुन पुलित्जर पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ। हामी प्रकाशित नियन बाइबल पनि पाउन सक्छौं, लेखक १ 16 वर्षको हुँदा लेखिएको उपन्यास।
यसको शैली र संरचना कस्तो छ
उपन्यास अध्यायमा विभाजित छ, जुन फलस्वरूप उप-अध्यायमा विभाजित हुन्छ। ती सबै तिनीहरू तेस्रो व्यक्तिमा छन् र विडम्बनापूर्ण पाठको अंश हो। यद्यपि त्यहाँ केहि अंशहरू छन् जुन तपाई पहिलो व्यक्तिमा पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ, इग्नाटियसको दृष्टि। यसले दुबै चरित्र र कथा आफै बुझ्दछ। यी उनी लेख्ने नोटबुकका साथै उनका साथी मिरना मिन्कोफसँग लेख्ने चिठीहरू हुन् जससँग उनी विश्वको दर्शनसँग टकराउँछिन्, तर साथसाथै उनले यो पूरा गरे जस्तो लाग्छ।
धेरैलाई लाग्छ कि The Plot of Fools को कहानी जोन क्यानेडी टूलको जीवनको धेरै भाग छ, जुन आफ्नै कथाको केही भागहरू प्रतिबिम्बित गर्न आउँदछ, चरित्रको स्थानको कारणले मात्र होइन, तर उसले गर्ने विभिन्न कामका कारण पनि, वा उसको आमासँगको सम्बन्धको कारण। त्यो इच्छा पनि हो किनकि उसले के लेख्छ त्यसले वास्तविकता वा संसार परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।
अब जब कि तपाइँ अलि राम्रा जान्नुहुन्छ मूर्खहरूको षडयन्त्र, तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो एक कालातीत उपन्यास हो, जुन यस समाजमा साथै विगतमा वा भविष्यमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, र चरित्र आफैले तपाईलाई उसको दर्शनको सामना गर्न लगाउँदछ। , उपरोधिक र क्रूर, संसारको। अब, उहाँ सहि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, केवल तपाईंको विचारमा निर्भर गर्दछ। के तिमीले पढेका छौ? के तपाई यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » Ceciuos को conjuing
क्लाउडियो रोड्रिग उनको मृत्युको वार्षिकी। कविताहरु